Ny takelaka sary tsara indrindra hanome elatra ny fahaizanao mamorona | Famoronana an-tserasera
Amin'ny fotoana rahoviana miaraka amin'ny iPad dia afaka manana Adobe Photoshop CC isika, manana fitaovana maro kokoa hosarihana amin'ny tanantsika na amin'ny stilosy isika. Ireo fitaovana ireo dia misy ny takelaka sary tsara indrindra misy ankehitriny ary maro aminareo no mahalala azy ireo.
Voalohany dia manana ireo an'ny Wacom isika, na dia misy hafa aza marika miavaka toy ny XP-Pen na Huion, ny olon-tsy fantatra sasany izay tafiditra anaty lisitra iray nohajain'ny marika voalohany. Andeha hojerentsika ireo andiana takelaka misy sary tsara indrindra hanomanana ny Zoma Mainty.
2 Ary M708
3 XP-Pen Artist 15,6 fampisehoana penina
4 Wacom Intuos Pro (lehibe)
5 Wacom Intuos Pro (mpanelanelana)
8 Wacom Mobile Studio Pro 13
Ao amin'ity lisitra ity dia hametraka takelaka sary tsara indrindra isika ary hanadino ny momba azy. Miatrika vidiny avo kokoa fotsiny izahay, fa manana kalitao tsy mampino hamoaka ny fahaizantsika na ny famolavolana ny sary manaraka ho an'ny orinasa izay iasantsika.
Wacom Cintiq 22HD Touch Pen Display dia misongadina a 25,6 x 15,7 santimetatra. Ny vahaolana dia 1920 x 1080 ary manana tsindry amin'ny penina amin'ny haavony 2.048. Hanana fifandraisana DVI sy USB 2.0 isika ary mifanaraka amin'ny Windows sy macOS.
Ny iray amin'ireo kileman-toetrany dia vahaolana ambany amin'ny efijery ho an'ny haben'ny takelaka sary; teboka afaka mamerina mihoatra ny iray.
Iray amin'ireo takelaka sary malaza indrindra izay mamela anao hanao sary amin'ny efijery mikasika azy ary afaka mampiasa ny Cintiq 22HD aza izahay ho toy ny monitor mahazatra. Ny vidiny dia manomboka amin'ny 1609,99 euro.
Fifantohana amin'ny vaovao Cintiq 24 Pro 24 ary ny hafa avy any Wacom.
La Ugee M708 dia takelaka misy sary izay misongadina amin'ireo lakileny 8 sy fahatsapana tsindry ao ny penina haavo 2.048. Takelaka 10 x 6 mirefy refy izay mampiavaka ny tsipika 5.080 isaky ny santimetatra ny famahana ny sary.
Hodinihina ny haben'ity takelaka an-tsary ity tonga miaraka amin'ny lafy tsarany sy lafy tsarany. Raha afaka tsy mila ny maharatsy azy isika na manana faharetana ilaina amin'ny fametahana azy amin'ny takelaka na hoe tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fampiharana sasany.
ny ny tanjany dia ny ety ambony, ny fotoana valiny ary ny lakileny 8 fidirana haingana. 127 Euro ny vidiny, noho izany dia tsy maintsy jerentsika izay mahaliana antsika momba ity takelaka ity, satria be ny faritra iasana.
XP-Pen Artist 15,6 fampisehoana penina
Ity takelaka ity dia miavaka amin'ny maha-iray amin'ireo takelaka sary tsara indrindra amin'ny resaka sandany amin'ny vola. Ny faritry ny sary mavitrika dia 34,3 x 19,3cm miaraka amina velarana 1920 x 1080 sy Refy 15,6 mirefy. Ny tsindry penina dia 8.192 haavo ary miavaka amin'ny fananana ny seranan-tsambo USB type-C vaovao. Mifanaraka amin'ny Windows sy macOS.
Nasongadinay fa miatrika takelaka sary misy vidiny lafo izahay amin'izay rehetra atolotray. Ny tiako hambara, ho an'ny 344,99 euro dia hanana penina tsara sy velarana malalaka isika ny sary. Izy io aza dia ahitana feo ho an'ny traikefa multimedia. Izany hoe, miatrika an'io takelaka io izahay izay manarona ny filan'ny mpamorona endrika na mpamorona mila tabilao misy sary.
Wacom Intuos Pro (lehibe)
Ny Wacom Intuos Pro dia takelaka misy sary io indrindra no tsara indrindra eo amin'ny sahan'asany. Lavorary ho an'ny famoronana sy ny karazana artista rehetra izay te hanana fahatsapana lehibe amin'ny penina, sary mivoaka ary mampiasa ny fifandraisana tsy misy tariby ho an'ny traikefa mpampiasa mahafinaritra.
Raha ny mombamomba azy. Ny Wacom Intuos Pro dia miavaka amin'ny 43 x 28,7 cm ary ny fahatsapana ny 8.194 tsindry penina. Izy io dia misy fifandraisana ifotony toy ny USB na Bluetooth.
Ity takelaka sary ity dia miavaka amin'ny fanomezana azy ny mpanakanto a toerana malalaka hisarihana malalaka ary tsy misy fanakantsakanana. Izany no mahatonga antsika miatrika ny iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny sehatra misy azy amin'ny alàlan'ny fanolorana traikefa ho an'ny mpampiasa amin'ny sehatra rehetra. Mety ho lehibe kokoa ny faritra anaovana sary, eny, nefa amin'ny tenany ihany dia manome be izy ho takalon'ny vidiny 479 Euros.
Wacom Intuos Pro (mpanelanelana)
Miatrika ilay zandrilahy noho ny Pro misy faritra misy sary izahay mahatratra 33,8 x 21,9 cm ary fahatsapana ny tsindry penina amin'ny haavony 8.192. Mampiasa fifandraisana USB sy Bluetooth ihany koa izy, ary toy ilay lehibe kokoa, manome traikefa an-tsary tsara izy io, na dia voafetra ihany aza ny habeny amin'ireo centimetatra fanampiny ireo.
Manolotra fanampiana marobe izy io ary azontsika atao ny manasongadina ny lakilen'ny hitsin-dàlan'ny asa maro samihafa. Raha atotaly dia misy lakilen'ny hitsin-dalana valo, ny pad touch sy ny faritra fanaovana sary ho an'ny takelaka misy sary tonga lafatra ho an'ny mpampiasa rehetra. Ianao dia afaka mampiasa fihetsika maro-mikasikaKa takelaka misy sary misy endri-javatra vitsivitsy amin'ny trosany.
Manakaiky ny vidiny ny 349 euro ho an'ny takelaka hodinihina raha mpamorona ny iray ary tsy mila habaka lehibe kokoa amin'ny habe lehibe. Wacom dia mbola mpanjaka ao amin'ity tsenan'ny takelaka sary ity ary ny ankamaroany dia noforonin'ity orinasa ity.
Miatrika takelaka misy sary izahay misy refy kely kokoa ary «vidiny ambany», na vidiny ambany. Tsy midika izany fa tsy hanome antsika ny fampiasana rehetra ilaintsika amin'ny tanjona sasany. Ny faritry ny sary dia 12,1 x 7,6 cm ary ny peniny dia manome fahatsapana tsindry 4.096 ambaratonga; izay tsy ratsy amin'ny takelaka mora vidy.
Iray amin'ireo Huion H430P takelaka sary ambony soatoavina dia ny fanomezana antsika ny fototra rehetra izay azonao jerena ao anaty takelaka nefa tsy mila mamoaka vola be ianao. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia isika no tonga lafatra manomboka amin'ity tontolon'ny takelaka misy sary ity ary mizaha raha toa ka mifanaraka amintsika ny mivoatra na manohy amin'ireo fitaovana nampiasaintsika hatrizay; Tsy ny rehetra no mila takelaka misy sary, fa miaraka amin'ny solosaina sy totozy, ary ny fahaiza-manao ampy, dia afaka mamorona endrika mahaliana ianao.
Mazava fa kely dia kely ny faritra anaovany sary, nefa ny penina dia mora tohina hahazoana ny fahafaha-miasa feno amin'ity takelaka misy sary ity. Mazava ho azy, amin'ny fotoana maha-tompon'ny Huion H430P anao dia hanomboka hahatsapa ianao fa mila zavatra bebe kokoa. Manana izany mihoatra ny 30 euro amin'ny fivarotana an-tserasera isan-karazany ianao.
Raha fantatsika amin'ny voalohany fa mila faritra fanaovana sary lehibe kokoa noho ny H430P isika, satria te-hanao sary nomerika miaraka aminy isika, ny Huion H640P dia mety amin'ny fanombohana, nefa tsy atao ambanin-javatra ny vidiny ambany.
Ny faritra fanaovana sary amin'ny takelaka sary Huion H640P dia 16 x 9,9 cm ary ny penina dia manana fahatsapana tsindry amin'ny haavony 8.192; manatsara mihitsy aza io teboka farany mankany amin'ny H430P io. Inona no hahatonga ny maro ho tia an'ity takelaka ity raha manana vola kely kokoa any am-paosiny izy ireo ary mitady haavo hafa rehefa mamolavola miaraka aminy.
Anisan'ireo hatsarany miankina amin'ny maha-kely antsika isika, na dia miaraka amin'ilay faritra fanaovana sary sy hazavana aza dia ankasitrahana izany. Manolotra traikefa an-tsary mahafinaritra izy io ary tsy mila bateria amin'ny penina ny penina. Izany no mahatonga antsika miatrika ny iray amin'ireo safidy tsara indrindra mankany Wacom. Indrindra raha fantatsika fa manodidina ny 50 euro izany.
Ary raha manana teti-bola hitsitsy isika, ny Wacom MobileStudio Pro 13 dia toetra tsara be dia be. Miresaka momba ny faritra fanaovana sary 29,4 x 16,51cm sy penina iray izay misy fahatsapana tsindry amin'ny haavony 8.192. Takelaka misy sary tena izy izay misy seranan-tsambo USB Type-C 3, Bluetooth ary WiFi.
La ny efijery dia manana vahaolana 2.560 x 1.440 ary izany no antony anolorany traikefa miavaka mahafinaritra. Toy ny traikefa an-tsary omeny. Tsy vitan'ny hoe mijanona amin'ity izy ity, fa ao anaty tsinainy kosa dia manana solosaina feno miaraka amin'ny Windows 10. Mba hahafantarana antsika, dingana iray hafa ao amin'ny takelaka misy sary io ary natokana ho an'ny tontolo matihanina; na dia tsy midika akory izany fa afaka mahazo iray ny olona.
Intel Core processeur, kapila mafy SSD, Windows 10, efijery tsara kalitao ary traikefa fanaovana sary avo lenta fotsiny. Azontsika atao ihany koa ny misafidy 16-inch hanana faritra fanaovana sary lehibe kokoa aza. Manodidina ny 1275 euro ny vidiny.
Ny iray hafa avy any Wacom izay misy penina ary miavaka amin'ny iray amin'ny haavon'ny tsindry 1.024 XNUMX. Ny faritra anaovany sary dia 15,2 x 9,5 sm amin'ny maodely kely, ka hatramin'ny 21,6 x 13,5 cm amin'ny maodely antonony.
ihany koa manana 4 fanalahidy mazava ahafahantsika manao hetsika haingana ary mitazona tsara ny penina eny an-tanantsika ary mampitombo ny vokatra amin'ny alàlan'ny takelaka misy sary. Izy io dia misy ny rindrambaiko fanaovana hosodoko Corel Painter Essentials, ahafahanao mamoaka ny fahaizanao amin'ity takelaka sary ity avy amin'ny marika Wacom malaza sy malaza.
99,90 euro ny vidiny ho an'ny maodely kely, raha ny habe antonony dia mahatratra 203 euro. Ny iray dia tsy maintsy mahita ny habeny ilainao hisarihana nomerika sy mahazo manao asa ny fomba ity. Aza adino fa ity no kinova vaovao an'ny Wacom CTL-471, noho izany mamporisika anao izahay hijery izany raha te-hitahiry euro vitsivitsy ianao.
Izao dia izao rehefa Wacom mandritra ny herinandro vitsivitsy dia miaraka amin'ny sasany fihenam-bidy lehibe amin'ny takelaka misy anao.
Takelaka misy sary mora vidy, fa iray izay manana ny kalitaony. Miresaka momba ny takelaka misy sary izahay miaraka amin'ny pensilihazo miaraka amin'ny haavon'ny tsindry 2.048 XNUMX. Ny velaran'ny efijery dia 10 x 6 santimetatra ary manolotra fanalahidy azo ekena 8 ho an'ny hetsika mahazatra indrindra.
Izy io koa dia manana lakilen'ny express tactile 6 hahafahana miditra amin'ireo fiasa mahazatra indrindra sy ny velarany dia 10 × 6 santimetatra. Izahay dia miatrika ny iray amin'ireo takelaka sary tonga lafatra ho an'ireo izay manomboka amin'ny kanto nomerika na mila mamolavola amin'ny pensilihazo. Kalitao tsara ary na dia tsy fantatrao aza ny marika, araka ny efa nolazainay, dia takelaka sary manomboka ary avy eo mieritreritra ny hifindra amin'ny hafa.
Ianao dia afaka vidio eo amin'ny 62 euro eo ho eo. Iray amin'ireo atolotra anao raha tsy manana teti-bola ambony ianao.
Ity takelaka sary avy amin'ny Huion dia mahatratra 19,5 santimetatra ary ao amin'ny peniny dia ahitantsika ny fahatsapana tsindry amin'ny haavony 8.192. Izy io dia miavaka amin'ny fampidirana azy ao anaty efijery ka toa ny endrika avo lenta an'i Wacom, saingy amin'ny vidiny hafa.
Ity efijery ity dia mampiasa vahaolana feno HD ary fanehoana loko tsara. Izany dia penina optika PE330 azo havaozina miavaka amin'ny bokotra roa ho an'ny hetsika haingana azontsika ampanjifaina amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny maha-teboka mahaliana azy dia ampiana fonon-tànana fanaovana sary (mba tsy hamela marika hatsembohana amin'ny tanana) ary toro-hevitra fanampiny mba tsy halainao amin'ny peninao mihitsy.
Iray amin'ireo takelaka hodinihina raha manana teti-bola lehibe kokoa isika. 452 euro ny vidiny, toy izany koa ireo natolotra raha mitady fitaovana ho takalon'ny vidiny tsy lafo isika.
Iray amin'ireo takelaka sary mety ho an'ny vao manomboka na ireo izay te-hanokana ny asany amin'ny famolavolana, satria miresaka zava-tsoa ara-toekarena avy amin'ny marika Wacom malaza izahay. Manana teboka fanerena 1.024 izy ary raisina ho toy ny rahavavin'i Wacom Intuos Pro. Azonao atao ny mampifandray azy amin'ny solosaina amin'ny tariby USB ary entiny miaraka aminy ny toro-hevitra telo amin'ny hateviny samy hafa ho an'ny pen.
Ny haben'ny ny velarana dia 21 x 14,8 cm miaraka amin'ny 5,8 surface ambonin'ny. Ny vidiny dia mahatratra 121,38 euro. Tokony holazaintsika fa manana maodely vaovao izy hisolo ny toerany, ny Wacom Intuos Art izay noresahintsika andininy vitsivitsy lasa izay.
Aza adino ny mijanona ho an'ny katalaogy Wacom vaovao amin'ity taona 2018 ity.
Ity takelaka sary ity Tonga hanolo ny iray amin'ny lafo indrindra amin'ny marika ity, ny Huion 1060 Pro. Takelaka fanaovana sary ambonin-tany lehibe misy penina misy tsindry 8.192 12. Amin'ny alàlan'ny lakilen'ny hitsin-dalana XNUMX dia azonao atao ny manatsara ny famokarana amin'ny alàlan'ny takelaka misy sary.
Ny penina dia azo averina indray, ao anatin'izany lakile roa ary afaka manome izay ilainao rehetra rehefa manao sary. Ny faritra iasany dia 10 x 6,25 santimetatra miaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny valiny tsara.
Ny vidiny? 81,99 euro. Y avelanay miaraka amin'ity tabilao be sary ity ianao miomana amin'ny fividianana ianao amin'ny zoma mainty manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Takelaka sary tsara indrindra
Ny doka voalohany nataonao tao amin'ny Instagram